Cách Tải, Sử Dụng Trên Điện Thoại, Máy Tính | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Cách Tải, Sử Dụng Trên Điện Thoại, Máy Tính | Muasalebang in Muasalebang
1 Uyilanda futhi uyifake kanjani i-Google Meet kumafoni namakhompyutha
1.1 Imiyalelo yokulanda i-Google Meet efonini yakho
1.2 Imiyalelo yokulanda i-Google Meet kukhompuyutha yakho
2 Ungawadala kanjani futhi wabelane ngamagumbi omhlangano ku-Google Meet
2.1 Kwenziwe ocingweni
2.2 Kwenziwe kukhompuyutha
3 Ungajoyina kanjani igumbi lomhlangano le-Google Meet
4 Uyivula futhi uyivale kanjani ikhamera nemakrofoni ye-Google Meet
5 Ungabelana kanjani ngesikrini ku-Google Meet
5.1 Kwenziwe ocingweni
5.2 Kwenziwe kukhompuyutha
6 Ungashejula kanjani amakilasi, imihlangano eku-inthanethi ku-Google Meet
7 Iziphakamiso zokukhetha ukuthenga ilaptop yomsebenzi wasehhovisi
Uyilanda futhi uyifake kanjani i-Google Meet kumafoni namakhompyutha
Imiyalelo yokulanda i-Google Meet efonini yakho
Isinyathelo 1: Okokuqala, hamba kuhlelo lokusebenza lwe-Google Meet oluvuliwe CH Dlala noma ngesixhumanisi esilandelayo: I-Google Play.
Isinyathelo sesi-2: Bese uchofoza ebhokisini Ukusetha ukulanda lolu hlelo lokusebenza efonini yakho. Linda ukuthi uhlelo lokusebenza luqinisekiswe ukuze lufakwe bese uthepha ibhokisi Vula iphelele.
Ufuna ukuthola uhlelo lokusebenza lwe-Google Meet ku-iOS, qala uye ku- isixhumanisi bese uqhubeka ukuyilanda efonini yakho. Ngemva kokulanda, uzobona i-Google Meet ivela esikrinini, udinga nje ukuvula lolu hlelo lokusebenza ukuze uqale ukulusebenzisela ukufunda noma ukushintshanisa umsebenzi nozakwenu.
Ukuze ufunde kabanzi nge-Google Meet, sicela ubheke: Yini i-Google Meet? Imiyalo enemininingwane Indlela yokusebenzisa i-Google Meet.
Imiyalelo yokulanda i-Google Meet kukhompuyutha yakho
Isinyathelo 1: Okokuqala, iya ekhasini lezilungiselelo zohlelo lokusebenza le-Google Meet elivuliwe Izandiso ze-Chrome bese uchofoza ibhokisi Engeza ku-Chrome.
Isinyathelo sesi-2: Bese uqinisekisa ngokuchofoza ibhokisi Amagajethi engeziwe ukulanda uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho.
Isinyathelo sesi-3: Ekugcineni, uyacindezela vula iwijethi Hlangana nesandiso ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesikrini se-Google Chrome bese uqala ukusebenzisa uhlelo lokusebenza.
Ungawadala kanjani futhi wabelane ngamagumbi omhlangano ku-Google Meet
Isinyathelo 1: Vula uhlelo lokusebenza lwe-Google Meet bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Gmail ukuze ufake uhlelo lokusebenza, bese uchofoza ibhokisi Umhlangano omusha.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi futhi ukudala umhlangano omusha khona kanye ohlelweni lwakho lokusebenza lwe-Gmail lwefoni!
Isinyathelo sesi-2: Bese uchofoza inketho Umhlangano osheshayo uyaqala.
Isinyathelo sesi-3: Ukwengeza amalungu egunjini lomhlangano kuzoba nezindlela ezingu-2:
Indlela 1: Kopisha isixhumanisi kufasitelana lesokunxele kwesikrini ukuthumela kumsebenzisi wekhompyutha noma kopisha ikhodi yekilasi yizinhlamvu ezingemva kwebinzana elithi meet.google.com/ ukuthumela le khodi kumsebenzisi wefoni
Indlela 2: Noma ungamaka ibhokisi Yabelana ngezimemo ukwabelana ngesixhumanisi segumbi lakho lomhlangano ngezicelo ezinjengoFacebook, uZalo,…
Isinyathelo sesi-4: Yenza izilungiselelo zokumisa kanye nemingcele edingekayo yemihlangano ye-inthanethi. Futhi, ungenza ngendlela oyifisayo imakrofoni nekhamera yakho ngezithonjana ezingaphansi kwesikrini.
Isinyathelo 1: Okokuqala, ngena ku-akhawunti yakho ye-Google kukhompyutha yakho, chofoza isithonjana sechashazi ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese ukhetha Hlanganani.
Uma usuvele ungene ku-imeyili yakho, vele uchofoze LOKHU ukuya ekhasini eliyisiqalo le-Google Meet.
Isinyathelo sesi-2: Ngemuva kokuthi kuvele isixhumi esibonakalayo se-Google Meet, khetha ibhokisi Umhlangano omusha.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, khetha into Qala Umhlangano Osheshayo.
Isinyathelo sesi-4: Bese uqhubeka nokwengeza amalungu emhlanganweni we-inthanethi. Kunezindlela ezimbili zokwengeza abantu emhlanganweni:
Indlela 1: Kopisha isixhumanisi kufasitelana elingakwesokunxele ukuze uthumele isixhumanisi kubasebenzisi bekhompyutha noma mhlawumbe kopisha ikhodi yomhlangano yizinhlamvu ngemuva kwe-meet.google.com/ ukuthumela le khodi kubasebenzisi befoni.
Indlela 2: Kungenjalo, ungakwazi futhi ukuthepha ibhokisi Abantu abengeziwe ohlangothini lwesobunxele kwesikrini.
Kamuva, Faka igama lakho noma i-imeyili womuntu ofuna ukumengeza egunjini lomhlangano bese ukhetha Thumela i-imeyili.
Ungajoyina kanjani igumbi lomhlangano le-Google Meet
Isinyathelo 1: Sicela ungene ngemvume I-Gmail kukhompyutha yakho bese ucindezela uphawu uphawu ichashazi ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini bese ukhetha Hlanganani.
Isinyathelo sesi-2: Bese ufaka ebhokisini Faka ikhodi noma isixhumanisi nge namathisela indlela ye-URL noma faka ikhodi yegumbi lomhlangano eku-inthanethi owabelwe ngamanye amalungu bese uchofoza ibhokisi Ukubamba iqhaza.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, uhlola ikhamera nemakrofoni ngaphambi kokujoyina igumbi lomhlangano eliku-inthanethi bese uchofoza ibhokisi Joyina manje.
Isinyathelo sesi-4: Ukuze uphume egumbini lomhlangano eliku-inthanethi kukhompuyutha yakho, thepha isithonjana sefoni phakathi kwekhamera nezithonjana zemakrofoni ngaphansi kwesikrini.
Kumafoni, ukuze uphume egumbini lomhlangano eliku-inthanethi, chofoza isithonjana sefoni ebomvu esingakwesokunxele sekhamera nemakrofoni.
Uyivula futhi uyivale kanjani ikhamera nemakrofoni ye-Google Meet
Uma isithonjana sekhamera ku-Google Meet sinesithonjana se-slash, ikhamera yakho iyavalwa. Ukuze uvule ikhamera udinga nje ukuchofoza isithonjana sekhamera, lapho lesi sithonjana singasenaso i-slash, ikhamera ivule ngempumelelo. Uma ufuna ukucisha ikhamera, ungenza okuphambene.
Ukuvula/ukuvala imakrofoni ku-Google Meet kufana nokuvula/ukuvala ikhamera. Udinga nje ukuchofoza isithonjana semakrofoni, lapho ubona i-slash, imakrofoni ivaliwe.
Le khamera nemakrofoni ivuliwe/ivaliwe isici sivumela abasebenzisi ukuthi benze ngendlela oyifisayo ngaphambi naphakathi nomhlangano.
Ungabelana kanjani ngesikrini ku-Google Meet
Isinyathelo 1: Chofoza isithonjana samachashazi angu-3 ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini sefoni.
Isinyathelo sesi-2: Bese, chofoza entweni Ukwabelana kwesikrini.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, ukhetha ibhokisi Qala ukusakaza-bukhoma.
Isinyathelo sesi-4: Isikrini sokuqala sibonisa umbukiso kuwo wonke umuntu osesikrinini.
Isinyathelo 1: Kusixhumi esibonakalayo somhlangano we-inthanethi, isikrini sizobonisa umlayezo ocela ukusebenzisa ikhamera yakho nemakrofoni, chofoza ibhokisi Vumela kuzoba.
Isinyathelo sesi-2: Kusixhumi esibonakalayo somhlangano we-Google Meet, chofoza ibhokisi Phrezenta kwesokudla. Bese ukhetha into Iwindi Isikrini sizobonisa amawindi owasebenzisayo njengamanje.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, uchofoza efasiteleni ukuze wabelane bese uchofoza ibhokisi Yabelana ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini.
Isinyathelo sesi-4: Uma ufuna ukwabelana ngethebhu kusiphequluli se-Google Chrome, lapha kuzovela ikhasi ofuna ukulivula. Bese, uthepha Ikhasi ofuna ukwabelana ngalo bese uthepha ibhokisi Yabelana.
Isinyathelo sesi-5: Ukuze uvale ukwabelana kwesikrini kukhompuyutha yakho, chofoza ibhokisi Misa ukwabelana ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini kuqediwe.
Ungashejula kanjani amakilasi, imihlangano eku-inthanethi ku-Google Meet
Isinyathelo 1: Vula uhlelo lokusebenza lwe-Google Meet kukhompuyutha yakho bese ukhetha Umhlangano okusha.
Isinyathelo sesi-2: Bese ukhetha Ikhalenda kukhalenda ye-Google.
Isinyathelo sesi-3: Lapha, ungasho futhi ukhethe isikhathi segumbi lomhlangano eliku-inthanethi.
Engeza indawo bese wengeza incazelo yesikhathi somhlangano ku-inthanethi.
Faka ikheli lakho le-imeyili yamalungu amenyelwe egumbini lomhlangano eliku-inthanethi esigabeni Isivakashi futhi uhlele ubumfihlo balawa malungu ku Amalungelo ezivakashi bese uchofoza ibhokisi Londoloza.
Isinyathelo sesi-5: Ekugcineni, chofoza ibhokisi elithi Thumela/Thumela ukuze uthumele isimemo kugumbi lomhlangano eliku-inthanethi kwamanye amalungu.
Iziphakamiso zokukhetha ukuthenga ilaptop yomsebenzi wasehhovisi
Macbook uku i-laptop encane Ihlangene futhi ilula, ama-intshi angu-13 kuphela, kodwa ukusebenza okunamandla, ukusetshenziswa okubushelelezi ngisho nesofthiwe esindayo, isibonelo I-MacBook Air M1 2020 13 inch 256GB MGND3SA/A.
Ngomkhiqizo Ikhompyutha ye-HP Ama-laptops ale nkampani ahlukene ngokwakhiwa, futhi imigqa evelele yomsebenzi wasehhovisi yilena: I-HP Pavilion 15″ laptop, I-HP Pavilion 14″ laptop,… inomklamo omuhle, ukusebenza okuzinzile kungaqhuba imisebenzi eminingi.
Ngaphezu kwalokho, ungaphinda ubhekisele emigqeni Ikhompyutha ye-Lenovo, Ikhompyutha ye-Acernoma Ikhompyutha yeDell Ngamasayizi ahlukahlukene ukusuka kumayintshi ayi-14 kuye kwayi-15 ongakhetha kuwo!
Ngenhla kunesihloko sendlela yokulanda nokusebenzisa i-Google Meet kumafoni namakhompyutha, ilula kakhulu futhi inemininingwane. Ngethemba, ngalolu lwazi uzolanda ngempumelelo i-Google Meet futhi ujabulele izici eziwusizo zalolu hlelo lokusebenza.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngamakhompyutha aphathekayo nama-PC atholakalayo njengamanje kwa-Nguyen Kim, sicela usithinte ngokushesha ngokusebenzisa iziteshi ezilandelayo ukuze uthole ukwesekwa okusheshayo: